ခယ်မလေးကို ပိုချစ်မိသွားသည် (စ/ဆုံး) – For You
ခယျမလေးကို ပိုခစြျမိသှားသညျ (စ/ဆုံး)
မွို့ပွရဲ့မှနျးကပြျမှုနဲ့အတူ ရုံးကအပွနျ ဘတျဈကားတိုးစီးရတဲ့ဘဝကို မငျးမငျးစိတျကုနျလှပွိ..ရနျကုနျသားဖွဈပမေယ့ျ ၄လှှာက condo ခနျးလေးသာ ငှားနနေိုငျသညျ.. အိမျရောကျတော့ပငျပနျးမှုတှနေဲ့ အိပျယာပေါျပဈလှဲပွိး အတှေးနယျဆန့ျလိုကျသညျ..မနကျဖွနျဆိုနယျပွနျသှားတဲ ဇနိးလေး မွတျနိုးပွနျရောကျမညျ.. အိမျထောငျကပြွိး ၃ နှဈ လောကျထိ လငျမယားနှဈယောကျစလုံးကလေး မယူဘဲ လှတျလှတျလပျလပျနကွေသညျ.. ပိုကျဆံလညျးပိုစုမိအောငျဖွဈသညျ…မွတျနိုးက ရှမျး ဗမာ ကပွားဖွဈသညျ.. အသားအရညျဖွူဖှေးပွိး ကိုယျလုံးထညျတောင့ျသညျ.. foreign trading company တဈခုမှာလုပျသောကွောင့ျ အလုပျခြိနျတှငျ ဘလောကျဈအကြီ ငျ်အဖွူနှင့ျ စကပျတိုတိုကိုသာ ဝတျဆငျရသညျ..
ခလေးလညျးမယူသေး gym လညျးပုံမှနျကစားသော မွတျနိုးကိုယျလုံးကိုကွည့ျပွိး ရုံးက ယောကြာၤးလေးတှေ ပဈမှားနကွေတာ မငျးမငျးလညျးရိပျမိသညျ.. သို့သောျ ကိစ်စမရှိ မွတျနိုးက ပိုကျဆံရှာဖို့ကလှဲပွိး ဘာမှစိတျမဝငျစားသောကွောင့ျ မငျးမငျး ကစိတျခပြွိးသား.. မွတျနိုးနဲ့လကျထပျပွိးကတညျးက နေ့တိုငျးပုံမှနျလိုးဖွဈသညျ.. မငျးမငျးကိုသိပျခစြျတဲ့ မွတျနိုးက မငျးမငျး ခိုသျးသမြှ လိုးသမြှအကုနျခံသလို အပေးလညျးကောငျးသညျ.. တှေးရငျး မငျးမငျးစိတျတှကွှေလာသညျ.. မနကျပွနျ မွတျနိုးပွနျလာမှ အတိုးခလြိုးမညျ.. ရုံးကနတေောငျခှင့ျတဈရကျယူထားသညျ.. ဒီညအဖို့တော့ဘီယာသောကျပွိး အိပျလိုကျသညျ…
” ကလငျ ကလငျ” မိုးလငျးတော့ အခနျးရှေ့မှ လူခေါျ bell က အသံမွညျလာသညျ.. မငျးမငျး အိပျခငြျမူးတူး နှင့ျ တံခါးဖှင့ျပေးလိုကျတော့ မွတျနိုးဖွဈသညျ.. ”ကွာလိုကျတာကိုမငျးရယျ အဲ့လောကျထိအိပျရလားလို့..” ”အငျးပါ .. sorry..” မွတျနိုးအနောကျကဟကောငျမလေးတဈယောကျပါလာသညျ.. မွတျနိုးလိုပဲဖွူဖွူတောင့ျတောင့ျခြောခြောလေး..ငယျတော့ငယျသေးသညျ.. ”ဘာကွောငျကွည့ျနတောလဲ..နနျးစုလေ မမှတျမိဘူးလား..နယျမှာဆယျတနျးဖွပွေိးတော့ ခုအားနတေုနျး computer သငျတနျးလေးလေးတကျရအောငျလို့ခေါျလာတာ ကိုမငျးလညျး computer ရတယျဆိုတော့ အဆငျပွတောပေါ့..” မွတျနိုးပွောတော့မှ မှတျမိတော့သညျ.. ဟုတျသား နနျးစုလေး ကို လှနျခဲ့တဲ့ ၃ နှဈလောကျကမှတဈခါပဲတှေ့ဖူးသညျ..
”သွောျ အေးအေး .. ကဲလာ အထဲဝငျကွတော့..” ပွနျရောကျရောကျခငြျးပဲ မွတျနိုးရမေိုးခြိုးပွိး ရုံး uniform လှဲနတောမွငျတော့..မငျးမငျးစိတျဓါတျကသြှားသညျ..”ဟာ မွတျနိုးကလညျး ခုမှပွနျရောကျတာကို မနားတော့ဘူးလား..” ”နားလို့မဖွဈဘူးကိူမငျးရဲ့ ခုပဲသူဌေးကဖုနျးဆကျတယျ ဒီနေ့အရေးကွိး meeting ရျှတယျဆိုလို့..” မငျးမငျး စိတျလသှေားသညျ.. မထူးတဲ့အဆုံးတဈခြီလောကျတော့ဆှဲမညျ.. မွတျနိုးကိုဟလှမျးဖကျပွိး နမျးလိုကျသညျ.. ”ဟာ ကိုမငျးကှာ ရုံးသှားးမလို့ပါဆို”.. ”မွတျနိုးကလညျး ကို့ကို မသနားဘူးလားဟ” ဟုဆိုကာ အကြီ ငျ်ကွယျသိးကိုဆှဲဖွုတျလိုကျပွိးဟမွတျနိုးရဲ့ နို့ဖှေးဖှေးတှကေို စို့သညျ.. ”ပွှတျ ပွှတျ”.. အခြိနျလညျးမရတာမို့ စကပျလှနျ ဘောငျးဘီတိုခြှတျပွိး .. စောကျပတျဝလိးတေ့ကာ လိုးထည့ျလိုကျသညျ… ”ဗွှတျဗွှတျ အ အား” မလိုးတာကွာပွိမို့ မွတျနိုးစောကျပတျကကပြျပွိး လိုးလို့တအားကောငျးနသေညျ.. ”ဗွှတျ ဗွှတျ ကောငျးလိုကျတာမွတျနိုးရယျ,” နို့စို့ ရငျး အခကြျငါးဆယျလောကျဆကျတိုကျ စောင့ျလိုးပွိးဟသုတျရညျတှပှေနျးထည့ျလိုကျသညျ.. ပွိးသှားတော့ မွတျနိုးလညျး မငျးမငျးကို အနမျးခွှပွေိး အဝတျစားပွနျလှဲကာရုံးကိုသုတျသုတျ လဈတော့သညျ.. မငျးမငျးလညျးမောမော နှင့ျအိပျယာထဲနာရီဝကျလောကျမှိနျးနလေိုကျသညျ.. ပွိးမှဟပုဆိုးကောကျဝတျပွိး သုတျရညျပတေဲ့ လီးဆေးရနျ ရခြေိုးခနျးသှားသညျ.. ရခြေိုးခနျးတံခါးကလညျး မပိတျဘဲစေ့ထားတာကွောင့ျ မငျးမငျးတှနျးဖှင့ျလိုကျသညျ..
”အမေ့ အောငျမလေး..” နနျးစု ထအောျသညျ.. မွငျကှငျးကွောင့ျ မငျးမငျးလညျးပွာသှားသညျ..ခယျမလေးက ရခြေိုးခနျးတံခါးမပိတျဘဲ ကိုယျတုံးလုံးရခြေိုးနသေညျ.. မငျးမငျးကိုမွငျတော့ လှန့ျပွိး လကျနှဈဖကျက ပေါငျကွားလေးထဲအုပျထားလိုကျတော့ နို့ဖှေးဖှေး နှဈလုံးက အကွိးကွိး.. နို့သီးခေါငျးလေးကလညျးပနျးရောငျသနျးနသေညျ.. ခါးကသှယျပွိး ဗိုကျခေါကျမရှိသော အပေါျပိုငျးကိုယျလုံးဖွူဖွူကိုမွငျတော့ မငျးမငျးဟတံတှေးမွိုခလြိုကျသညျ.. နနျးစုလေးလညျး မိမိ အပေါျပိုငျးဗလာကငြျးကို မငျးမငျးကွောငျကွည့ျနတောတှေ့တော့ ..နို့ဖှေးဖှေးနှဈလုံးကိုလကျနဲ့ပွနျကာလိုကျသညျ.. ပိုစိုးသှားသညျ.. ပေါငျဖွူဖွူသှယျသှယျကွားမှ အမှှေးနုအုပျနသေော စောကျဖုတျကိုမွငျရတော့ ပုဆိုးအောကျမှလီးကပွနျထောငျလာသညျ..
”ဘာကွည့ျနတောလဲကိုကွိးရ သှားတော့လေ” ”သွောျ Sorry နောျ..” ခယျမလေး ရှကျရှကျဖွင့ျအောျလိုကျသောကွောင့ျ မငျးမငျးလညျး မှနျထူပွိးလှဲ့ထှကျသှားလိုကျသညျ.. စိတျထဲခယျမလေးကိုလညျး အားနာသှားသညျ.. မိမိကို အထငျသေးသှားမှာလညျးစိုးသညျ..ရခေဲသတေ်တာထဲမှ beer တဈဘူးယူကာ အခနျးထဲဝငျသောကျပွိးပွနျအိပျနလေိုကျသညျ.. နေ့လညျရောကျ ထမငျးစားခနျးသှားတော့ ပနျးကနျဆေးနတေဲ့ခယျမလေးကို အနောကျကတှေ့သညျ.. မငျးမငျးအသံမပေးဘဲအနောကျကထိုငျကွည့ျနသေညျ.. အိမျနဝေတျ ဂါဝနျပါးအပနျးရောငျဝတျထားလို့ အလငျးရောငျကလညျးပွနျနတေော့ ခယျမလေးကိုယျလုံးက အထငျးသားမွငျရသညျ.. ဖငျကကွိးပွိးကောကျနသေညျ နို့ကလညျး မွတျနိုးအပြိုတုနျးကထကျကွိးပွိးလှသညျ.. ကွည့ျကောငျးနတေုနျး နနျးစုလှည့ျလာသောကွောင့ျ အားနာသှားရပွနျသညျ.. နနျးစုက မသိဘဲစကားပွောသညျ..”ထမငျးစားတော့မှာလား ကိုကွိး ခူးပေးမယျလေ” ”အေးအေး”.. ထမငျးစားရငျးစိတျထဲက ခယျမလေးကို အားနာနတေုနျး.. ”သွောျ.. ခယျမလေးနနျးစု.. မနကျကကိစ်စ sorry နောျ.. ကိုကွိးလညျး ရုတျတရကျဆိုေ့တာ့ကွောငျသှားလို့ပါ..”
”ရပါတယျကိုကွိးရ.. စုလေးလညျးပေါ့ဆသှားတာကို ထားလိုကျတော့ ဘာမှမဖွဈခဲ့သလို မေ့လိုကျမယျလနေော့” သဘောထားကွိးလှနျးတဲ့ခယျမလေးအပွောကွောင့ျ မငျးမငျးပွုံးရငျး ထမငျးဆကျစားလိုကျသညျ..ညနရေောကျတော့ မွတျနိုးပွနျရောကျလာသညျ.. ခနနား ရမေိုးခြိုးပွိး သုံးယောကျသားညနစောလကျဆုံစားတော့.. မွတျနိုးက ”ကိုမငျး ရေ လငျမယားခငြျးအားတော့နာပါတယျ.. မနကျဖွနျခှင့ျတဈရကျထပျယူပွိး စုလေးကိုသငျတနျးလိုကျအပျးပေးလိုကျပါလား..” ”အငျးလေ ရပါတယျ ကိုလညျးအလုပျပါးနတောဆိုတော့.. ” ထမငျးစားပွိးနာရီဝကျလောကျနတေော့ အခနျးထဲဝငျကွသညျ..မငျးမငျးက မွတျနိုးကို အနောကျကလမျးဖကျပွိး နို့ကို နယျဆော့လိုကျသညျ.. နောကျကနလေညျး လီးက ဖငျကွားကို ထဘီပါးပါးပေါျမှ ထောကျနသေေးသညျ.. လကျကအောကျကိုဆငျးပွိး ထဘီခြှတျချကြာ စောကျပတျကွားထဲ ပှတျပေးလိုကျသညျ.. ပွိးမ မွတျနိုးကို ကုတငျပေါျလှဲခိုငျးပွိး ပေါငျဖွဲကာ စောကျပတျကို လြှာနဲ့လြှကျပွိး စောကျစိကိုဆှဲစုပျလိုကျသညျ.. ”အား ကောငျးလိုကျတာ ဟင့ျ” မွတျနိုးညညျးရငျး မငျးမငျးခေါငျးကို ပေါ့ငျကွားထဲအတငျးဆှဲကပျထားလိုကျသညျ.. ပွိးမှ မွတျနိုးပါးစပျဝလီးတေ့ပေး လိုကျတော့ မွတျနိုးကစုပျပေးသညျ.. အရှိနျရလာမှ စောကျပတျကို လိူးတော့သညျ.. အနကေုနျအိပျထားသောကွောင့ျ အားပွည့ျနသေော မငျးမငျးရဲ့လိုးခကြျတှကေကွမျးသညျ.. မွတျနိုးလညျးခါးကို ကော့ပေးထားသညျ.. ”ဗွှတျ ဗွှတျ အားအား..” နို့စို့ရငျးလိုးလိုကျ ခါးကိုငျရငျးလိူးလိုကျနဲ့ မငျးမငျး ဆကျတိုကျလိုးနသေညျ.. အလနျးတံကားက မပိတျထားသည့ျ အတှကျ အပွငျမှ နနျးစု ခြောငျးကွည့ျနတောကို မငျးမငျးရိပျမိသညျ..
”မွတျနိုး ဖငျကုနျးကှာ..” ဖငျကုနျးပေးလိုကျတော့ မွတျနိုးစောကျပတျက ဖငျဖွူဖွူကွားမှ အာထှကျလာသညျ.. လီးထည့ျကာ ခပျကွမျးကွမျးဖိလိုးလိုကျသညျ..”ပွှတျ ပွှတျ ဗွှတျဗွှတျ..” စောင့ျလိုးမှုကွောင့ျ မွတျနိုးရဲ့နို့က တှဲကပြွိး ခါရမျးနသေညျ.. မငျးမငျးလညျးပွိးခငြျလာတာကွောင့ျ မွတျနိုးဆံပငျကိုစောင့ျဆှဲပွိး ဆကျတိုကျလိုးကာ.. သုတျရညျတှပေနျးထည့ျလိုကျသညျ…ခိုးကွည့ျနတေဲ့ခယျမလေး ရှေ့မှာ.. မငျးမငျးတမှငျခပျကွမျးကွမျးလိုးခဲ့ခွငျဖွဈသညျ..
.. မနကျရောကျတော့ မွတျနိုးကရုံးသှားပွီ.. သငျတနျးလိုကျအပျပေးရနျ မငျးမငျးတဈယောကျခယျမလလေးနနျးစုကို ဧည့ျခနျးကစောင့ျနတော တောျတောျကွာနပွေီ စိတျက မရှညျခငြျတော့..
”ဟီး sorry နောျကိုကွိး စောင့ျတာကွာသှားလား” ရနျကုနျစရောကျဖူးပွိး အပွငျထှကျရတော့မည့ျခယျမလေးပုံစံက ပြောျပွိးစိတျလှုပျရှားနသေညျ..ဇဈနောကျဆှဲစကပျပနျးနုရောငျ ဒူးပွတျထိဝတျထားလို့ ခွသေလုံးဖွူဖွူက လှလှနျးသညျ..
ဖငျကကွိးလှနျးသောကွောင့ျ စကပျကကပြျနပွေီး ပေါငျလုံး နှင့ျ စောကျပတျရာတောငျပေါျနသေညျ..ခြိုငျးပွတျအမဲလေးပေါျမှ ဇာအကြီ ငျ်ပါးလေးကိုထပျဝတျထားလို့ ရှှရေငျ အစုံက ဖွူဖှေးလှနျးလှသညျ.. ရှှအေိုရောငျဆံသားအောကျက ဂုတျသားဖွူဖွူလေးက ကိုကျခငြျစရာ..ခယျမလေးတဈကိုယျလုံးကို အသေးစိတျကွည့ျပွိးမှ ” ရပါတယျ လာလသှေားစို့” မငျးမငျးကို တကယ့ျအဈကိုရငျးကွိးတဈယောကျလို အားကိုးရှာတဲ့နနျးစုက သငျတနျးတကျရမညျကိုသာ တှေးရငျးစိတျလှုပျရှားနသေညျ..တက်ကစီ စီးတော့ အနောကျခနျးမှာတူတူထိုငျကွသညျ.. ခယျမလေးအလှ ကိုယျရနံ့တို့ကို အနှီးကပျခံစားလိုကျရတဲ့ မငျးမငျး တံတှေးတှမွေိုခလြိုကျသညျ.. ကားစီးရငျးလီးက တောငျလာသညျ.. စိတျထဲခယျမလေးကို လိုးခငြျစိတျတှပေိုမြားလာသညျ.. ဒါကွောင့ျ ခယျမလေးကို လိုးနိုငျရနျ တဈလမျးလုံးကွံစညျနခေဲ့သညျ..
သငျတနျးအပျပွိး ခယျမလေး practice လုပျဖို့ software ခှအေနညျးငယျနဲ့အတူ 18+ကားအခြို့ကိုပါ တမငျဝယျခဲ့သညျ.. ခယျမလေးကို အိမျမှာ ထိုကားမြားဖွင့ျ video editing ပွနျသငျပေးရမညျ.. အိမျပွနျရောကျတော့ မိမိတို့လငျမယားလိုးတာကို ခယျမလေးခြောငျးနကေနြရော၌ cctv camera တပျထားလိုကျသညျ.. တဈရကျနှဈရကျလောကျတော့ ခယျမလေးကို သငျတနျးကွိုပို့ဖွဈသညျ.. နောကျပိုငျးတှငျတော့ လိုကျမပို့ဖွဈဘဲ ခယျမလေးတဈယောကျတညျးသာ သှားလာနပွေီဖွဈသညျ.. တိုကျအောကျထပျက ကုလားမဲတဈကောငျကလညျး ခယျမလေးကို ပိုးနသေူဖွဈသညျ.. ခယျမလေး ကစိတျမဝငျစာသောျလညျးသငျတနျး အသှားအပွနျတိုငျးစကားလိုကျပွောနသေညျ.. ထိုမွငျကှငျးတှကွေောင့ျ မငျးမငျး တဈခကြျပွုံးပွိး သူတို့နှဈယောကျစကား အပွနျအလှနျပွောနပေုံမြားကို ဓါတျပုံ ဆယျပုံလောကျအမိအရိုကျထားလိုကျသညျ..
ဒီညတော့ မွတျနိုး စောစောအိပျသညျ.. ဧည့ျခနျးထဲ comp uter ကငြ့ျနတေဲ့ ခယျမလေးဆီကို မငျးမငျး beer ဘူးကိုငျပွိး ဘေးမှာဝငျထိုငျလိုကျသညျ.. ”ခယျမလေး နနျးစု.. ကိုကွိးခွတေောကျတှညေောငျးလှနျးလို့ နှိပျပေးပါဦး.. ” ”ဟုတျ ကိုကွိး..” အဈကို အရငျးသဖှယျ ဆရာသဖှယျသဘောထားသော မငျးမငျးကို နနျးစုက ကွောကျသညျ.. ရိုသသေညျ..ခွသေလုံးက စနှိပျနသေော ခယျမလေးအလှကိုကွည့ျပွိး မငျးမငျးစိတျတှထေနျလာသညျ.. ကုနျးနှိပျနတေော့ ညဝတျဂါဝနျ လညျက ဟနပွေိး နို့ဖွူဖွူကိုဘောျလီပနျးရောငျနဲ့အတူတှေ့ရသညျ.. ပေါငျရငျးလောကျထိရောကျတော့ ဘောငျးဘီတိုမဝတျထားတဲ့ ပုဆိုးကွား လီးကထောငျနပွေိ.. နနျးစု သတိထားမိသောျလညျး ဘာမှမပွောသေးဘဲ ဆကျနှိပျနလေိုကျသညျ.. မငျးမငျးစိတျတှထေိနျးမရတော့ဘဲ ဂါ။နျအောကျက နနျးစုပေါငျတနျကို လှမျးပှတျလိုကျသညျ.. နနျးစုလညျးလှန့ျသှားပွိး မငျးမငျးလကျကို ခါခကြာ အိပျခနျးထဲပွနျပွေးဝငျသှားလိုကျသညျ.. မငျးမငျးစိတျထဲမတငျမကဖြွဈ အံကွိတျပွိး.. အိပျပြောျနသေော ဇနိးလေး မွတျနိုးကိုသာ စိတျကွိုကျလိုးလိုကျသညျ..
မနကျရောကျတော့ ထမငျးစားနတေုနျးမွတျနိုးက ”သွောျ ကိုမငျးရေ သနျဘကျခါကရြငျ company က အရေးကွိးကိစ်စနဲ့ မွတျနိုး စလုံးကိုသှားရမယျ.. နှဈပါတျလောကျတော့ကွာမှာ.. အဲ့တာ နျးစုလေးကို ဂရုစိုကျဥိးနောျ.. အောကျထပျက ကုလားက နနျးစုနောကျလိုကျနတော မွတျနိုးလညျးမကွိုကျဘူး..” မငျးမငျးကြနေပျစှာပွုံးလိုကျပွိး ”စိတျခပြါ မိနျးမရာ..” မငျးမငျး အပွုံးကမရပျတော့ ..ခယျမလေးက ဘာမှမပွောဘဲထမငျးသာဆကျစားနသေညျ..မွတျနိုးကို လဆေိပျလိုကျမပို့ခငျ ကတညျးကဟမငျးမငျး ကာမအားတိုးဆေးကွိုသောကျထားပွိးသား.. အိမျပွနျရောကျတော့ ဧည့ျခနျးဆိုဖာပေါျနားနလေိုကျသညျ.. သငျတနျးသှားရနျခယျမလေးထှကျလာသညျ.. ခြိတျထဘီနဲ့ ရှပျအကြီ ငျ်ပါးကိုဝတျဆငျထားတဲ့ နနျးစုကိုယျလုံးက မငျးမငျးကိုစိတျပိုကွှစသေညျ..
”နနျးစု ခနနေဥိး. မငျးကိုပွစေရာရှိတယျ..” လသေံမာနတေဲ့ မငျးမငျးစကားကွောင့ျ နနျးစုလညျးခွလှေမျးတန့ျသှားသညျ..”ဟုတျ ပွောပါကိုကွိး..” လကျထဲကိုငျထားသော ဓါတျပုံအခြို့ကို ခယျမလေးအားပွလိုကျသညျ..ဓါတျပုံတှေ့တော့ နနျးစုလှန့ျသှားသညျ.. အောကျထပျက ကုလားနဲ့ နနျးစု နှဈယောကျတညျးပုံဖွဈသညျ.. ရိုးရိုးပုံမဟုတျ.. လငျမယားသာသာ ခစြျရညျလူးနပေုံမြားဖွဈသညျ..မငျးမငျးကြှမျးကငြျပိုငျနိုငျသော photoshop မြားပငျဖွဈသညျ..”ဟာ ဒါဘာတှလေဲ မဟုတျဘူးနောျကိုကွိး..” ”ဘာမဟုတျရမှာလညျး အဲ့လောကျထိ လကျပူးလကျကပြျမိနတောတောငျ..” ဟုတျလညျးဟုတျသညျ ဓါတျပုံတှကေ တကယ့ျ အစဈအတိုငျးပငျ..
‘မဟုတျပါဘူး ကိုကွိးရယျ ဒါသကျသကျလုပျကွံထားတာပါ..” နနျးစု ငိုလပွေိ..” ဘာကို လုပျကွံရမှာလဲ.. ဒီဓါတျပုံတှကေို နယျက မငျးမိဘဆီပို့လိုကျရမလားပွော..” ”ဟင့ျ မလုပျပါနဲ့ကိုကွိးရယျ..” နနျးစုတောငျးပနျရှာသညျ.. မငျးမငျးလညျးမလြှော့ဘဲ.. ”မငျးကှာ.. မိဘနဲ့ အဈမက မငျးကိုကောငျးစခေငြျလို့ ရနျကုနျမှာ သငျတနျးတကျခိုငျးတာ..ငါ့မှာလညျးစာတှပွေပေးလိုကျရတာ.. ခုတော့ မငျးက ကုလားလိုးတာခံနတေယျ .. စောကျပတျတောျ တောျယားနလေား.. ကုလားမယားဖွဈခငြျနတောဟုတျလား..” ခကျထနျလှနျးတော့ မငျးမငျးလသေံကွောင့ျ နနျးစု ဘာပွနျပွောရမှနျးမသိတော့.. ကလေးတဈရောကျလိုသာ ငိုပွိး ဘူးသာခံငွငျးနရှောသညျ..မငျးမငျးကပဲဆကျပွိး computer ဖှင့ျကာ မိမိတို့လိုးနကေို နနျးစုခြောငျးကွည့ျတဲ့ video file တှဆေကျပွလိုကျသညျ.. နနျးစု ဘာမှမပွောနိုငျတော့.. ”ခုမှ ငိုဘဲငိုမနနေဲ့.. ငါတို့လိုးတာတှခြေောငျးကွည့ျပွိး ကုလားလိုးတာသှားခံတယျ.. ကုလားလီးတောျတောျကွိုကျနလေား..မေးနတောဖွလေေ.. ” ‘
‘ဟင့ျ မဟုတျပါဘူးကိုကွိးရယျ..” နနျးစုငိုပဲ ငိူနတေော့သညျ.. ”မငျးအဈမ သိသှားရငျဘယျလိုနမေလဲ.. ဓါတျပုံတှေ မငျးမိဘဆီပို့လိုကျရငျ မငျးကိုကုလားနဲ့ပေးစားမယျဆိုတာသိလား..” မိဘတှဆေီရောကျလို့မဖွဈနနျးစု သလေိမ့ျမညျ.. ”မပို့နဲ့ ကိုကွိးရယျ တောငျးပနျပါတယျ..” မငျးမငျးကြနေပျသှားသညျ.. ” အေး ငါမေးတာဖွေ မငျးကုလားမယားလုပျပွိး ကုလားလိုးတာခံမလား .. ငါခိုငျးတာလုပျမလား..” ”ဟင့ျ.. ကိုကွိးခိုငျးတာလုပျပါ့မယျ..”
”အေး လာခဲ့ ငါ့နားကို..” စားပှဲပေါျလှယျအိပျတငျပွိး မငျးမငျးဆီလာခဲ့သညျ.. ခြိတျထဘီ ကှဲဝတျထားတော့ လမျးလြှောကျတိုငျး ပေါငျရငျးသားထိတှရေသညျ..ရှပျအကြီ ငျ်ကပါးလို့ ဗိုကျအသားဖွူဖွူလေးက လြှကျခငြျစရာ.. မငျးမငျးက ဆကျပွိး ” မငျးစောကျပတျတောျတောျယားနလေား..” ကွမျးတနျးလှနျးတဲ့မေးခှနျးကွောက့ျ နနျးစုငိုနပွေနျသညျ.. ”မေးနတောဖွလေေ.” ”မယားပါဘူးကိုကွိးရယျ”..” ငါ့နားတိုးလာခဲ့”
နနျးစု ကွောကျကွောကျနှင့ျတိုးလာသညျ.. မငျးမငျးလညျး နနျးစုကိုယျလုံးကိုစိုကျကွည့ျ လီးကပိုတောငျလာသညျ.. ထဘီပေါျကနပွေိး တငျးနတေဲ့ ဖငျကို ပှတျလိုကျ ညဈလိုကျလုပျသညျ..နနျးစု အလိုမတူသောျလညျး ကွောကျလို့သာညိမျခံနရေသညျ.. လကျက ထဘီအောကျလြှိုဝငျပွိး ပေါငျးသားတှကေိုပှတျသညျ.. အတှငျးခံပါးပေါျကနပွေိး ဖငျကိုနှိုကျပွနျသညျ..ပွိးမှ.. ” အကြီ ငျ်ခြှတျလိုကျ”.. နနျးစုလေးလန့ျသှားသညျ.. ”မလုပျပါနဲ့ကိုကွိး ရယျ ..” မငျးမငျးစိတျမရှညျတော့ ” မငျးကုလားကိုကြ တော့ စောကျပတျပွဲအောငျလိုးခံပွိးတော့.. ငါနောကျဆုံပဲမေးမယျ.. မငျးသဘောပဲ.. ကုလားမယားဖွဈခငြျလား ငါလိုးတာခံမလား ဖွေ”.. နနျးစုလညျး မတတျနိုငျတဲ့အဆုံး အကြီ ငျ်ကွယျသိးဖွုတျကာ ခြှတျလိုကျတော့..ဘောျလီထဲမှ နို့က လြှံထှကျနသေညျ.. ” ထဘီပါခြှတျစမျး” စိတျမရှညျဘဲ ကိုယျတိုငျဆှဲခြှတျလိုကျတော့ ဘောျလီနဲ့ ပငျတီ အပနျးရောငျဝမျးဆကျနှင့ျ ခယျမလေးကိူယျလုံးက ထလိုးခငြျစရာ..မငျးမငျး မတျတပါထပွိး ခယျမလေးကိုသိုငျးဖကျကာ နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို စုပျနမျးလိုကျသညျ…
လကျကလညျး ဖငျကိုပှတျလိုကျ စောကျပတျကိုထိုးကလိလိုကျလုပျသညျ.. ဘောျလီခြိတျကိုဖွုတျလိုကျတော့..နို့ဖွူဖွူကွိးနဲ့ နို့သီးခေါငျးပနျးရောငျလေးကို လြှာနဲ့ကလိပွိး စို့သညျ..”အ အ” ခယျမလေးခါးတှကေော့တကျလာသညျ.. ပွိးမှပငျတီကိုခြှတျလိုကျတော့ စောကျမှေးနုတှကွေားက အပြိုစငျစောကျစိလေးက လိုးခငြျစရာ.. မငျးမငျးဒူးထောကျလိုကျပွိး ခယျမလေးပေါငျကွားကနေ စောကျပတျကိုလြှကျနလေိုကျသညျ..” မလုပျပါနဲ့ကိုကွိးရယျ..” မငျးမငျးဘာမှပွနျမပွောဘဲ. ဆကျလြှကျနလေိုကျသညျ..စောကျစိကွားမှ အရညျတှစေီးကလြာသညျ.. ”အား အငျး ဟငျး..” ခယျမလေးညညျးသံကွောင့ျ မငျးမငျးကြနေပျသှားပွိး မတျတပျပွနျထကာ ပုဆိုးခြှတျလိုကျသညျ.. ဆေးရှိနျကွောင့ျ လီးက ပုံမှနျထကျပိုကွိးပွိး မာနသေညျ..ခယျမလေးလကျကိုယူကာ လီးပေါျတငျထားလိုကျသညျ.. နနျးစုလညျး ကိုငျပွိး ဂှငျးတိုကျသလို လုပျပေးကာ မငျးမငျး စုပျနမျးတာခံလိုကျ.. နို့စို့တာခံလိုကျနဲ့ ပွုသမြှနုနရေသညျ.. ” မငျး ထိုငျခလြိုကျ.” နနျးစုကိုထိုငျခိုငျးပွိး ပါးစပျနားလီးတေ့ပေးလိုကျသညျ..မမအလိုးခံတာ မွငျဖူးနသေောကွောင့ျ လီးစုပျခိုငျးမှနျးသိသညျ.. လီးတံကိုငုံကာ စုပျပေးလိုကျသညျ..
မငျးမငျးလညျးကောငျးလှနျးသောကွောင့ျ ပါးစပျကို ဆကျတိုကျလိုးနလေိုကျသညျ..ပွိးမှ နနျးစုကိုဆိုဖာပေါျအိပျခိုငျးလိုကျသညျ.. စောကျရညျရှှဲနတေဲ့ စောကျပတျဝကို လိးကွိးတေ့ပွိး ထိုးထည့ျလိုကျသညျ..”ဗွဈ ဗွဈ.. အား နာတယျ ကိုကွိးရ..” သှေးတှထှေကျလာသညျ..မငျးမငျး ဘာမပွောဘဲ ဆကျတိုကျနာနာလေးလိုးလိုကျသညျ.. အဈမလညျးလိုး ခယျမဖွူဖွူခြောခြောလေးကိုလညျး ပါကငျဖေါကျပွိးတကျလိုးရသောကွောင့ျ စိတျကွိုကျဖွဈနသေညျ.. နို့လုံးလုံးလေးကို ကုနျးစို့ပွိး အခကြျ လေးငါးဆယျလောကျစောင့ျလိုးကာ သုတျရညျတှပေနျးထည့ျလိုကျသညျ..တဈခြီပွိးသှားသောျလညျး လိးကမသသေေး.. ခယျမမကြျနှာပေါျပွောငျးပွနျတကျခှပွိး 69 shape နဲ့ လီးစုပျခိုငျးပွနျသညျ.. စောကျစိထဲလြှာနှင့ျဆှဲစုပျလိုကျသညျ.. ခယျမလေးပါးစပျကိုလညျး လိုးရငျး လရညျတှေ ပနျးထည့ျလိုကျသညျ..ပကျလကျအနထေားဖွဈနတေဲ့ခယျမလေး က လရညျအကုနျမွိုခလြိုကျရသညျ.. မငျးမငျးက မပွိးသေး.. အခနျးထဲသှားပွိး ဖငျလိုးတဲ့ gel ဘူးယူလာသညျ..
ခယျမလေးကိုဖငျကုနျးခိုငျးသညျ.. ဖငျဖွူကွိးကိုမွငိတော့ မငျးမငျး လီးက ပိုတောငျလာသညျ..ဖငျတုံးကိုလကျဖွင့ျရိုကျခလြိုကျသညျ.,”ဖွနျး ဖွနျး” ဖငျခါသှားသညျ..ဖငျကုနျးနတေဲ့ခယျမလေူး ပေါငျကွားထဲဝငျပွိး စောကျပတျကိုထပျလြှကျသညျ.. ပွိးမှ တောငျလြှောကျ စအိုဝကိုပါ လြှာနဲ့လြှကျပွိးထိုးကလိလိုကျသညျ.. ”အား ကိုကွိးရယျ ဟင့ျ”.. စအိုဝဆီလူးပွိး လီးထိုးထည့ျလိုကျသညျ.. ”ဗွဈ ဗွဈ..အား နာလိုကျတာကိုကွိးရ” မငျးမငျး ဆကျတို ကျစောင့ျလိုးနသေညျ.. စောကျပတျကောငျးသလောကျ ဖငျလညျးလိုးလို့ကောငျးသော ခယျမလေးပငျ.. ဖငျကွိးကို ဖွဲပွိး ဆကျတိုကျစောင့ျလိုးကာ.. တဈခြီထပျပွိးသှားပွနျသညျ…အားကုနျသှားတော့ နို့ကိုငျပွိး ခယျမလေးကိုသာ အနမျးခွှေီနလိုကျသညျ.. မွတျနိုးပွနျမလာခငျအထိတော့ ခယျမလေးက မွတျနိုးအစား နေ့တိုငျးအလိုးခံရသညျ.. မွတျနိုးပွနျလာပွိးနောကျပိုငျးလညျး ခယျမလေးနဲ့ ခိုးခိုးပွိးလိုးဖွဈကွသေးသညျ.. the end ။